သင့် ဆီးခုံမွှေးအကြောင်း သိထားသင့်သမျှ – Gentleman Magazine
တစ်ခါတစ်လေမှာ သင် အရင်က လုံးဝ မစဉ်းစားမိတဲ့ သင့် ခန္ဓာကိုယ်က အစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်း စဉ်းစားဖို့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ အခု သင့် ဆီးခုံမွှေးအကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ စပြီး ပြောပြပါမယ်။
ဒီ စိတ်ပျက်စရာ ဇာတ်လမ်းက အင်္ဂလန်၊ West Sussex မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Mark Longley ဆိုတဲ့ သတို့သားလောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Bachelor Night ပါတီ ဆင်နွှဲနေတာပါ။ အဲဒိမှာ အရက်မူးနေတဲ့ သူ့ဘော်ဒါတွေက သူ့ကို ကုလားထိုင်မှာ ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး သူ့ဆီးခုံမွှေးကို သူ့မျက်နှာပေါ် ပြန်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ FB တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ချင်ရင် အဲဒိဓာတ်ပုံကတော့ အောက်မှာပါ။ (ပုံနှင့် တွဲတင်ရန်)
သင့်မှာ သင့်ကို အဲလို လုပ်မယ့် သူငယ်ချင်းတွေ မရှိတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ အခု အမေးအဖြေ ပုံစံလေးနဲ့ တင်ဆက်သွားပါမယ်။
ဆီးခုံမွှေး ဘာကြောင့် ကောက်သလဲ?
ဆရာဝန်တွေ၊ သမိုင်းပညာရှင်တွေ၊ ဆီးခုံမွှေး ဝါသနာရှင်တွေ( ရှိပါတယ်) မျိုးစုံ မေးကြည့်ရာမှာ တော်တော်များများမှာ အဖြေမရှိပါဘူး။ တချို့တွေကတော့ မှန်းဆနိုင်ကြပါတယ်။ ဆီးခုံမွှေးဟာ တခြားအမွှေးတွေထက် ကောက်ပြီး ထူနေတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူလ အစ ကြောင့်ပါ။ အဲဒါက ဆက်ဆံစဉ်မှာ အရေပြားထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ လိမ်ကောက်နေရတာကတော့ အဲဒိနေရာက ထွက်တဲ့ အနံ့နဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ပိုပြီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ပါလို့ သုတေသနပြုသူတစ်ယောက်က ဆိုပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တော့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ? နံကနံသေး..
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သုံးသန်းလောက်တုန်းက လူတွေ အဝတ်အစားမပါပဲ သွားနေကြတုန်းမှာ အဲဒိနေရာက အနံ့က လိင်ဆက်ဆံဖို့ ညွှန်ပြနေတာနဲ့ တူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ယောက်ျားအချင်းချင်း အဲဒိအမွှေးအုံ ပိုကြီးတဲ့ သူက ပိုပြီး ဆရာကျတယ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခြင်္သေ့တွေရဲ့ လည်ဆံမွှေးလိုပါ။ လူတွေရဲ့ ဆီးခုံမွှေးက ဂေါ်ရီလာအမွှေးနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ ဆီးခုံသန်းကလဲ ဂေါ်ရီလာတွေဆီက ကူးလာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးခုံသန်း?? တော်ပြီကွာ…. ရှမ်ပူနဲ့ သေချာသွားလျှော်ဦးမယ်..
ရှမ်ပူနဲ့ လျှော်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဆပ်ပြာနဲ့ ရေဆို ရပါပြီ။ ရှမ်ပူတွေက အမွှေးအမျှင်တွေကို အလုံးပိုကြီးစေလို့ပါ။ ပိုပြီး တောက်ပြောင်လာစေပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ တစ်လက်မကနေ တစ်လက်မခွဲထိပါ။ စံချိန်တင် အနေနဲ့တော့ တောင်အာဖရိကက Maoni Vi ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဒူးခေါင်းထိ ဆီးခုံမွှေးရှိတယ်လို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ၂၈ လက်မပါ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သင့် အဲလောက် မရှည်နိုင်ပါဘူး။ သင် စိတ်ပူရမှာက အဲဒိနေရာမှာ ပြောင်သွားမှာကိုပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ထိပ်ပြောင်သလိုပါ။ လူကြီးပိုင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချက်ထဲ အကုန် မကျွတ်ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းပါ။
ရပါတယ်။ ဂရုတော့စိုက်ပါ။ သတိထားပါ။
၂၀၀၂ နဲ့ ၂၀၁၀ ကြားမှာ ဆီးခုံမွှေးရိတ်ရင်း ရှမိလို့ အရေးပေါ်ခန်းရောက်လာသူ အရေအတွက် ငါးဆ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ကပ်ပယ်အိတ်ပေါ်က အရေပြားဟာ တခြားနေရာနဲ့ မတူပါဘူး။ ဘက်တီးရီးယားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ နည်းနည်းလေး ရှမိတာနဲ့တင် ဘက်တီးရီးယားတွေ ကိုယ်ထဲ ဝင်သွားပါတယ်။ အရမ်းရှားပါးတဲ့ အခြေအနေမှာ Fournier gangrene ဆိုတဲ့ဟာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါ ဘာကြီးလဲ။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး။
အဲဒါရဲ့ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပါယ်က flesh eating bacteria of the balls ပါ။ ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေနဲ့ ဆီးချိုရှိသူတွေ အများဆုံး ခံစားရပါတယ်။ ကုသနည်းကတော့ ဘောပေါ်က အရေပြားတွေ အကုန် ခွဲစိတ်ထုတ်ရမှာပါ။
သငျ့ ဆီးခုံမှေးအကွောငျး သိထားသငျ့သမြှ
တဈခါတဈလမှော သငျ အရငျက လုံးဝ မစဉျးစားမိတဲ့ သငျ့ ခန်ဓာကိုယျက အစိတျအပိုငျးတှေ အကွောငျး စဉျးစားဖို့ တျောတျောခကျပါတယျ။ အခု သငျ့ ဆီးခုံမှေးအကွောငျးကို ဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျနဲ့ စပွီး ပွောပွပါမယျ။
ဒီ စိတျပကျြစရာ ဇာတျလမျးက အင်ျဂလနျ၊ West Sussex မှာ ဖွဈခဲ့တာပါ။ Mark Longley ဆိုတဲ့ သတို့သားလောငျးတဈယောကျဟာ သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Bachelor Night ပါတီ ဆငျနှဲနတောပါ။ အဲဒိမှာ အရကျမူးနတေဲ့ သူ့ဘျောဒါတှကေ သူ့ကို ကုလားထိုငျမှာ ကွိုးနဲ့တုပျပွီး သူ့ဆီးခုံမှေးကို သူ့မကျြနှာပျေါ ပွနျကပျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ FB တငျခဲ့ပါတယျ။ ကွညျ့ခငျြရငျ အဲဒိဓာတျပုံကတော့ အောကျမှာပါ။ (ပုံနှငျ့ တှဲတငျရနျ)
သငျ့မှာ သငျ့ကို အဲလို လုပျမယျ့ သူငယျခငျြးတှေ မရှိတာ ကြေးဇူးတငျလိုကျပါ။ အခု အမေးအဖွေ ပုံစံလေးနဲ့ တငျဆကျသှားပါမယျ။
ဆီးခုံမှေး ဘာကွောငျ့ ကောကျသလဲ?
ဆရာဝနျတှေ၊ သမိုငျးပညာရှငျတှေ၊ ဆီးခုံမှေး ဝါသနာရှငျတှေ( ရှိပါတယျ) မြိုးစုံ မေးကွညျ့ရာမှာ တျောတျောမြားမြားမှာ အဖွမေရှိပါဘူး။ တခြို့တှကေတော့ မှနျးဆနိုငျကွပါတယျ။ ဆီးခုံမှေးဟာ တခွားအမှေးတှထေကျ ကောကျပွီး ထူနတောက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မူလ အစ ကွောငျ့ပါ။ အဲဒါက ဆကျဆံစဉျမှာ အရပွေားထိခိုကျမှုကို ကာကှယျဖို့နဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှကေ ကာကှယျပေးနိုငျတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ လိမျကောကျနရေတာကတော့ အဲဒိနရောက ထှကျတဲ့ အနံ့နဲ့ ဟျောမုနျးတှကေို ပိုပွီး ထိနျးသိမျးထားနိုငျဖို့ပါလို့ သုတသေနပွုသူတဈယောကျက ဆိုပါတယျ။
ထိနျးသိမျးထားနိုငျတော့ ဘာလုပျရမှာလဲ? နံကနံသေး..
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး သုံးသနျးလောကျတုနျးက လူတှေ အဝတျအစားမပါပဲ သှားနကွေတုနျးမှာ အဲဒိနရောက အနံ့က လိငျဆကျဆံဖို့ ညှနျပွနတောနဲ့ တူနိုငျပါတယျ။ ပွီးတော့ ယောကျြားအခငျြးခငျြး အဲဒိအမှေးအုံ ပိုကွီးတဲ့ သူက ပိုပွီး ဆရာကတြယျ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ခွင်ျသတှေ့ရေဲ့ လညျဆံမှေးလိုပါ။ လူတှရေဲ့ ဆီးခုံမှေးက ဂျေါရီလာအမှေးနဲ့ တျောတျောတူပါတယျ။ ဆီးခုံသနျးကလဲ ဂျေါရီလာတှဆေီက ကူးလာတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဆီးခုံသနျး?? တျောပွီကှာ…. ရှမျပူနဲ့ သခြောသှားလြှျောဦးမယျ..
ရှမျပူနဲ့ လြှျောဖို့ မလိုပါဘူး။ ဆပျပွာနဲ့ ရဆေို ရပါပွီ။ ရှမျပူတှကေ အမှေးအမြှငျတှကေို အလုံးပိုကွီးစလေို့ပါ။ ပိုပွီး တောကျပွောငျလာစပေါတယျ။
ပုံမှနျဆိုရငျတော့ တဈလကျမကနေ တဈလကျမခှဲထိပါ။ စံခြိနျတငျ အနနေဲ့တော့ တောငျအာဖရိကက Maoni Vi ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ဒူးခေါငျးထိ ဆီးခုံမှေးရှိတယျလို ဖတျဖူးပါတယျ။ ၂၈ လကျမပါ။ မစိုးရိမျပါနဲ့။ သငျ့ အဲလောကျ မရှညျနိုငျပါဘူး။ သငျ စိတျပူရမှာက အဲဒိနရောမှာ ပွောငျသှားမှာကိုပါ။
ဟုတျပါတယျ။ ထိပျပွောငျသလိုပါ။ လူကွီးပိုငျးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ တဈခကျြထဲ အကုနျ မကြှတျပါဘူး။ တဖွညျးဖွညျးပါ။
ရပါတယျ။ ဂရုတော့စိုကျပါ။ သတိထားပါ။
၂၀၀၂ နဲ့ ၂၀၁၀ ကွားမှာ ဆီးခုံမှေးရိတျရငျး ရှမိလို့ အရေးပျေါခနျးရောကျလာသူ အရအေတှကျ ငါးဆ မွငျ့တကျလာပါတယျ။ ကပျပယျအိတျပျေါက အရပွေားဟာ တခွားနရောနဲ့ မတူပါဘူး။ ဘကျတီးရီးယားတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ နညျးနညျးလေး ရှမိတာနဲ့တငျ ဘကျတီးရီးယားတှေ ကိုယျထဲ ဝငျသှားပါတယျ။ အရမျးရှားပါးတဲ့ အခွအေနမှော Fournier gangrene ဆိုတဲ့ဟာ ဖွဈတတျပါတယျ။
အဲ့ဒါ ဘာကွီးလဲ။ တဈခါမှ မကွားဖူးဘူး။
အဲဒါရဲ့ တိုကျရိုကျ အဓိပ်ပါယျက flesh eating bacteria of the balls ပါ။ ကိုယျခံအားနညျးသူတှနေဲ့ ဆီးခြိုရှိသူတှေ အမြားဆုံး ခံစားရပါတယျ။ ကုသနညျးကတော့ ဘောပျေါက အရပွေားတှေ အကုနျ ခှဲစိတျထုတျရမှာပါ။
Previous: သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၄)ခု
Next: သင့်ကလေးကို သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ (၁၁) ခု